Vaovao - Maninona no misafidy fanaka an-kalamanjana Sunmaster?
Sun Master dia hita tamin'ny taona 1996. Ny mpiara-miombon'antoka dia ahitana marika F & B sy trano fandraisam-bahiny marobe, toa ny Guangzhou Shanglian Thai Restaurant sy Libya "A-one" Playcafe & Restaurant. Taorian'ny fitomboan'ny 25 taona dia nanana traikefa lalina izahay, teknolojia matihanina, rafitra matotra. Ho fanampin'izay, izahay koa dia iray amin'ireo mpitarika vitsivitsy amin'ny indostrian'ny fanaka ivelany manana traikefa mihoatra ny 25 taona.
Mahazo ny BSCI sy ny ISO 9 0 0 1: 2015 amin'ny ezaky ny ekipa matihanina Sun Master mihoatra ny 300. "Ny kalitao voalohany, ny mpanjifa aloha" no tanjonay. Hiara-hiasa amin'ireo namana eran'izao tontolo izao izahay izay avo lenta tokoa -kavanana sy serivisy tso-po avy amin'ny haitao matihanina sy ny rafitra fitantanana siantifika.
Izahay dia tsy orinasa OEM fotsiny manana traikefa 20 taona mahery, fa ny orinasa mpamorona endrika vaovao kosa dia mandroso maodely mihoatra ny 30 isaky ny vanim-potoana. Mba hanomezana kalitao tsara indrindra dia nanafatra ireo milina extruding izahay, milina fanodinana anodizing ary fitaovana fikarohana avy any amin'ny firenena mandroso, ary mpiasa 200 manana traikefa matihanina maherin'ny 15 taona. Ny fahafaha-manana hatramin'ny 80,000 fanaka isam-bolana.